Cajalad Koollo ah, Cajalad -bireed Aluminium ah, Cajalad Warqad Macaan - Meiyuan
Sharaxaada shirkadda iyo wax soo saarka
WAXAAN KU JIRNAA WAX -GARADKA TAP -KA DHEERKA AH
Waxaa la aasaasay 1998, Jiangyin Meiyuan Industries Corporation waxaa ka go'an R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta cajaladda HVAC/qaboojiyaha-qaaska ah, dahaarka dahaarka ee isku-darka ah, dahaarka aluminium ee ka tarjumaya laba-dhinac, cajalad laba-dhinac ah iyo dhejis cadaadis xasaasi ah. Shirkaddayadu waxay ku taal Jiangyin, oo ku taal badhtamaha Yangtze River Delta oo ku faanaysa dhaqaalaha ugu horumarsan Shiinaha, waxayna ku raaxaysataa gaadiid ku habboon oo ku xidhan Webiga Yangtze ee woqooyi iyo Shanghai xagga koonfureed.
Alaabtayadu waxay u qaybsan tahay saddex qaybood
Cajalad -bireedka Aluminium
Ku habboon isku -xidhka tollada dhammaan agabyada isku -dhafka ah ee aluminium, iyo xidhitaanka iyo hagaajinta daloolka ciddiyaha daloolka iyo jabka; daboolidda iyo uuminta uumi ee dhogorta dhoobada kala duwan/guddiyada dahaarka dhogorta dhagaxa/tuubooyinka iyo tuubooyinka; isku xidhka hagaajinta khadadka biraha ee qalabka guriga sida qaboojiyaha iyo qaboojiyaha.
Eeg wax badan >>
Cajalad Koollo Laba Gees leh
Wax -qabad heer sare ah, darajo xirfadeed 120μm cajalad laba dhinac leh, xoog isku xirnaan sare leh. Ku habboon alaabta haragga sida boorsada gacanta, qaybaha gudaha ee baabuurka, oo si weyn loogu isticmaalo xumbo ku dheggan qalabka guriga sida qaboojiyaha iyo qaboojiyaha.
Dahaarka -bireed dahaaran Wajahaya
Heerka adeegsiga Foil-Kraft Facing oo ka kooban 7-bireed micron iyo warqad 50gsm Kraft ah, oo inta badan loo adeegsado sidii loolan & uumi caqabad ka samaysan galawool / rockwool / dhogor macdanta / dahaarka duubka xumbada, ayaa sidoo kale ku habboon codsiyada kale ee dahaarka halkaas oo guud ahaan uumiga la isticmaalo retarder ayaa loo baahan yahay. Sidoo kale waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay codsiyada caqabadaha dhalaalaya sababta oo ah shucuurtiisa hooseysa.
Meiyuan waxay sameysay shaybaar u gaar ah iyo kooxda R&D farsamo, waxayna soo bandhigtay qalabkii tijaabada ee ugu dambeeyay. Iyada oo leh adeegyo farsamo oo udub dhexaad u ah, Meiyuan waxaa ka go'an inay siiso macaamiisha adeegyo farsamo oo codsi loo habeeyay iyo xalalka cajaladda hal-joogga ah, si ay uga caawiso macaamiisha inay kor u qaadaan badeecadaha duugga ah, iyo inay horumariyaan alaabo cusub.
Deegaanka u fiican
Meiyuan waxay ku faantaa qalab wax soo saar oo horumarsan, geedi socod farsamo oo heer sare ah, iyo maareyn tayo adag. Iyada oo ay weheliso kormeerkii geedi-socodkii wax-soo-saarka ee dhexdhexaadka ahaa, xakamaynta tayada geedi-socodka oo dhan ee alaabada ayaa la hirgeliyey, iyada oo bixineysa taageero aad u weyn tayada alaabta Meiyuan oo aad u sareysa.
Meiyuan wuxuu had iyo jeer u hoggaansamaa mabaadi'da daacadnimada iyo daacadnimada. Shaqaalaha adeegga macaamiisha ee Meiyuan ee xirfadda leh ayaa ku siin kara talooyin xirfadeed oo ku aaddan la -qabsiga saxda ah ee badeecadaha. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto, adeegyadeena waxaa lagu bixin doonaa waqtigii loogu talagalay.
Koox aad u fiican
Hadda, aan eegno alaabtayada.
Dahaarka dahaarka leh ee dahaarka leh
Cimilada Qabow Aluminium -bireed
Maro Fiberglass Maro Aluminium -bireed
Cajalad bireed aluminium la xoojiyay
Is -Dhaawaca Cajaladda Aluminium -ka
Nooca -xidhka iyo mesh Mesh cajalad bireed Aluminum
Waraaqda sii-daynta Kraft- cajalad dhinac-laba-gees leh
Warqad sii-dayn cad-cajalad dhinac ah
Waraaqda sii deynta Glassine - cajalad dhinac -labanlaaban
DFR-1001B dahaarka dahaarka-bireed dahaadhay
FPW-765 dahaarka dahaarka bireed
FSK-R7150A dahaarka-bireed dahaarka
Cajalad Mareenka Maro -Blue
Cajalad Mareenka Maro -Green
Cajaladda Mareenka Dharka- Caddaan
Habka dhismaha ee bireed aluminium saqafka qaab dhismeedka bir caag ah
Sida loo gaaro 300 ℃ sare ..
Waa maxay isticmaalka cajaladda aluminiumka ah
Soosaarka iyo astaamaha guud ee kraft ..
Soo hel badeecada aad ugu baahan tahay
Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Sharooto, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka,